२०७७ बैशाख १९ प्रकाशित १०:३५
दाहाल–नेपाल समूहले भने यो प्रस्तावले प्रधानमन्त्री आफैंलाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताएका छन्। ‘भोलिका दिनमा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आए कुन विधिमा टेकेर कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यस’bout प्रधानमन्त्रीले सोच्दै नसोची अलमल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ एक नेताले भने।
गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा उनीनिकटकै नेताहरूले विश्वास गरेका छैनन्। गौतमनिकट नेता बलराम बास्कोटाले प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधान नै नभएको अवस्थामा आएको प्रस्तावलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरे। ‘रोडम्यापबिनै आएका प्रस्तावलाई कसरी पत्याउने ? प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया के हो ? त्यस’bout कुनै कुरै आएको छैन। यो वैज्ञानिक प्रस्ताव पनि होइन,’ उनले भने।
प्रकाशित | २०७७ बैशाख १९ प्रकाशित १०:३५
सरकारले जनताको चाहना पुरा गर्छः प्रचण्ड
अभियुक्त घलेले बयानमा गोरेसँग चिनजान नै नभएको दाबी
राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिय न्युयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री